merolagani - अनलाईन कारोबारको कार्यतालिका सार्वजनिक, के छ नेप्सेको तयारी ?
अनलाईन कारोबारको कार्यतालिका सार्वजनिक, के छ नेप्सेको तयारी ?
नेपाल स्टक एक्चेञ्जले अनलाईन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी बनाउन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् । गत कार्तिक २० गते देखि संचालनमा ल्याएको अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले सोमबार नेप्सेमा धर्ना दिएपछि नेप्सले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
शेयर बजारका अन्दोलित लगानीकर्ताहरुलाई नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले मौखिक जवाफ दिएका थिए । तर पनि लगानीकर्ताहरु विश्वस्त नभएपछि नेप्सेले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
अनलाईन कारोबार प्रणलीलाई सहज बनाउन चरण बद्धरुपमा कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको नेप्सेको दाबी छ ।
नेप्सेले कार्यतालिका अनुसार मंसिर १६ गते अनलाईन कारोबार प्रणालीमा कारोबार गर्ने तरिका सिक्नका लागि लगानीकर्तालाई युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यसपछि मंसिर २३ गते लगानीकर्तावाट प्राप्त हुने उचित सुझावहरुलाई समेत टिएमएसमा समावेश गरी धितोपत्र दलालसंग सम्झौता गरेका लगानीकर्तालाई युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउने नेप्सेले जनाएको छ ।
यस्तै पौष १७ गते देखि ब्रोकर कम्पनीसंग सम्झौता भएका लगानीकर्ताहरुलाई युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएर सम्पुर्ण प्रयोगकर्तालाई अनलाईन कारोबार प्रणाली खुल्ला गरिने छ ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल पूँजीबजार संघको आह्वानमा लगानीकर्ता संघर्षमा उत्रिएका थिए ।